Fanatanjahan-tena hanombohana amin'ny hatsarana | Nutri Diet
Fanazaran-tena telo tokony ho fantatry ny rehetra
Michael Serrano | | Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena, fahasalamana
Raha nanararaotra nanandrana fanazaran-tena isan-karazany ianao dia mety ho voamarikao fa niseho izy ireo ny fanazaran-tena mitovy hatrany hatrany. Izany dia satria izy ireo dia mandaitra izaitsizy ary, amin'ny fampifangaroana azy ireo, dia azo atao ny miasa ny hozatra lehibe amin'ny vatana.
Miorina amin'ny hetsika sarotra kokoa, ireto no telo amin'ireo fanazaran-tena tokony ho fantatry ny tsirairay. Diniho ny fizahana azy ireo raha toa ianao ka manomboka mihetsiketsika ary mila mifankazatra amin'izy ireo na raha veterana mila soda ianao.
Mijoroa amin'ny tongotrao mifanitsy ary aparitaho amin'ny sakan'ny soroka. Ento eo an-damosin'ny lohanao ny tananao ary atondiho ivelany ny kiho, ary mamorona karazana "T" amin'ny vatanao.
Aforeto ny lohalinao ary, aondrano mafy ny valahanao, apetraho mifanitsy amin'ny tany ny feny. Mba hikoropahana tsara dia tokony hitodika amin'ny voditongotra ianao.
Ahitsy ny tongotrao mandra-piverinao amin'ny toerana fanombohana. Rehefa mijoro ianao dia aza hadino ny manery ny glute anao mba hitrandrahana tsara amin'ny fanatanjahan-tena.
Ity dia isaina ho soloina iray.
Atombohy amin'ny toeran'ny plank, izany hoe, ny vatanao iray manontolo mifanitsy amin'ny tany ary mitazona ny lanjanao eo amin'ny tongotrao sy ny tananao ihany.
Ataovy mahitsy ny sandrinao sy ny tongotrao, amin'ny soroka eo ambonin'ny sorony. Mifoka rivotra ary, rehefa mifoka rivotra ianao, aoliho ny sisilanao amin'ny sisiny ary ampidino amin'ny tany ny tratranao. Mijanona rehefa mifanaraka amin'ny kiho ny sorokao. Mandrosoa hanitsy ny sandrinao.
Mandry amin'ny tany amin'ny lamosinao. Aforeto ny lohalinao ary apetaho amin'ny tany ny tongotrao. Ampitao eo ambonin'ny tratranao ny tananao mba ho eo an-tsoroka mifanohitra amin'izany ny tsirairay. Azonao atao koa ny mametraka azy ireo ao ambadiky ny loha, toy ny amin'ny sary.
Tazomy amin'ny tany ny ombelahin-tongony sy ny rantsan-tongonao, hamafiso ny hozatry ny kibonao ary atsangano moramora aloha ny lohanao, arahin'ny soroka. Miakara hatrany mandra-pahatongan'ny lamosinao eo amin'ny zoro 90 degre miaraka amin'ny tany.
Tazomy ho an'ny segondra ny toerana ary, amin'ny fomba voafehy, miverena amin'ny toerana fanombohana.
Fanamarihana: Amin'ity fampihetseham-batana ity dia azonao atao ny mampiasa tsihy na zavatra hafa mba tsy handratra ny lamosinao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena » Fanazaran-tena telo tokony ho fantatry ny rehetra
Sakafo tsy lany andro na elaela vao maty
Tombontsoa azo avy amin'ny dite Matcha